မွေးနေ့မှာ အွန်လိုင်းကနေပြီး ငွေကျပ်(၃၆)သိန်းဖိုး ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စမိုင်း – Suehninsi
စမိုင်းလ်ကတော့ ဇွန်လ (၂၂) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့်မွေးနေ့မှာ ပရိသတ်တွေအတွက် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်တွေ လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့ ညမှာ ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ “ကျွန်မချစ်ရတဲ့ Smiley တွေကိုဘယ်လိုပျော်အောင်လုပ်ပေးရမလဲ။ ဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမလဲအမြဲစဉ်းစားနေတတ်တဲ့ကျွန်မ အခုမွေးနေ့လည်းနီးလာပြီဆိုတော့ ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲစဉ်းစားနေတာ။ အခုလို Covid အချိန်မှ
ာလူတွေအဓိကလိုအပ်နေတာ ပိုက်ဆံပဲဆိုတော့ Smile ရဲ့မွေးနေ့မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါးဂိမ်းတွေလည်း Live ကစားကြမယ်” ဆိုပြီးတော့ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ စမိုင်းလ်ရဲ့ Facebook Page ကနေတဆင့် ဂိမ်းတွေ ဆော့ကစားရင်း ကံစမ်းမဲတွေဖောက်ပေးမယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ “Smiley တွေအကုန်လုံးကလည်းပါဝင်ကစားနိုင်မယ် ပြီးတော့ ကံစမ်းမဲတွေလည်းလုပ်မယ်။ ပထမဆု- ၁၀သိန်း၊ ဒုတိယဆု – ၅ သိန်းအပါအဝင်
သိန်းပေါင်း ၃၆သိန်းတိတိကို ချစ်ရတဲ့သူတွေကို လက်ဆောင်ပြန်ပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးကို ၂၁ရက်နေ့ မှာကျင်းပမယ်နော်. ဒီ Page လေးကို Like နဲ့ See first လုပ်ထားကြအုန်းနော်။Smile ရဲ့ Online Birthdayparty” လို့လည်း ဆက်လက်ပြောပြလာပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်စမိုင်းလ်ဟာ မေလ(၈) ရက်နေ့က ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီးမှာ ကျပ်သိန်း(၁၀၀) ကျော်တန် အသက်ရှုစက်တစ်လုံး လှူခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမဟာ Covid ကာလမှာ We Love Yangon ကနေတဆင့်
အလှူအတန်းတွေ လုပ်ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းရယ်၊ သမီးလေး နှစ်ယောက်ရယ် နဲ့ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုဘဝလေးကို တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စမိုင်းလ်တို့မိသားစုကိုတော့ အားမကျတဲ့ ပရိသတ်မရှိသလောက်ပါပဲ။ စမိုင်းလ်ဟာ ခင်ပွန်းကောင်းကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်သလို၊ အရမ်းလိမ္မာတဲ့ သမီးလေး နှစ်ယောက်ကို လည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ် ဟာ အခုချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေလည်း
အများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားသလိုကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ကိုလည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေသူတစ်ဦးပါ။ ဒီလိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိလာနိုင်အောင်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူက အလုပ်ကြိုးစားသလို သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အိမ်ထောင်မှုကိုထိန်းသိမ်း ရ တယ်လို့ အင်တာဗျူးမှာဖြေဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုဆိုရင် စမိုင်းလ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကိုပါ ဦးဆောင်နေသလို ပရိသတ်နဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့ သရုပ်ဆောင် အလုပ်တွေပါ ပြန်လုပ်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အဘွားဖြစ်သူ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ကြီး ဒေါ်ခင်လေးဆွေရယ်၊ သူချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းရယ်၊ သမီးလေး နှစ်ယောက်ရယ် နဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖြတ်သန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စမိုငျးလျကတော့ ဇှနျလ (၂၂) ရကျနမှေ့ာ ကရြောကျမယျ့မှေးနမှေ့ာ ပရိသတျတှအေတှကျ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ အစီအစဉျတှေ လုပျဖို့ စီစဉျထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီအစီအစဉျကိုတော့ ဇှနျလ (၂၁) ရကျနေ့ ညမှာ ပွုလုပျသှားမယျလို့ သူက ပွောပါတယျ။ “ကြှနျမခဈြရတဲ့ Smiley တှကေိုဘယျလိုပြျောအောငျလုပျပေးရမလဲ။ ဘယျလိုစိတျခမျြးသာအောငျလုပျရမလဲအမွဲစဉျးစားနတေတျတဲ့ကြှနျမ အခုမှေးနလေ့ညျးနီးလာပွီဆိုတော့ ခဈြရတဲ့သူတှကေိုဘာလုပျပေးရမလဲစဉျးစားနတော။ အခုလို Covid အခြိနျမှ
ာလူတှအေဓိကလိုအပျနတော ပိုကျဆံပဲဆိုတော့ Smile ရဲ့မှေးနမှေ့ာ ပြျောပြျောပါးပါးဂိမျးတှလေညျး Live ကစားကွမယျ” ဆိုပွီးတော့ ဇှနျလ ၉ ရကျနေ့ ည ၁၁ နာရီကြျောက သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ စမိုငျးလျရဲ့ Facebook Page ကနတေဆငျ့ ဂိမျးတှေ ဆော့ကစားရငျး ကံစမျးမဲတှဖေောကျပေးမယျလို့ သူက ဆိုပါတယျ။ “Smiley တှအေကုနျလုံးကလညျးပါဝငျကစားနိုငျမယျ ပွီးတော့ ကံစမျးမဲတှလေညျးလုပျမယျ။ ပထမဆု- ၁၀သိနျး၊ ဒုတိယဆု – ၅ သိနျးအပါအဝငျ
သိနျးပေါငျး ၃၆သိနျးတိတိကို ခဈြရတဲ့သူတှကေို လကျဆောငျပွနျပေးမဲ့အစီအစဉျလေးကို ၂၁ရကျနေ့ မှာကငျြးပမယျနျော. ဒီ Page လေးကို Like နဲ့ See first လုပျထားကွအုနျးနျော။Smile ရဲ့ Online Birthdayparty” လို့လညျး ဆကျလကျပွောပွလာပါတယျ။ သရုပျဆောငျစမိုငျးလျဟာ မလေ(၈) ရကျနကေ့ ဝဘောဂီဆေးရုံကွီးမှာ ကပျြသိနျး(၁၀၀) ကြျောတနျ အသကျရှုစကျတဈလုံး လှူခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ သူမဟာ Covid ကာလမှာ We Love Yangon ကနတေဆငျ့
အလှူအတနျးတှေ လုပျခဲ့တာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ သူခဈြရတဲ့ ခငျပှနျးရယျ၊ သမီးလေး နှဈယောကျရယျ နဲ့ပြျောရှငျစရာ မိသားစုဘဝလေးကို တညျဆောကျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ စမိုငျးလျတို့မိသားစုကိုတော့ အားမကတြဲ့ ပရိသတျမရှိသလောကျပါပဲ။ စမိုငျးလျဟာ ခငျပှနျးကောငျးကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားသူဖွဈသလို၊ အရမျးလိမ်မာတဲ့ သမီးလေး နှဈယောကျကို လညျး ပိုငျဆိုငျထားတာဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျ စမိုငျးလျ ဟာ အခုခြိနျမှာ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးတှလေညျး
အမြားကွီးပိုငျဆိုငျထားသလိုကိုယျပိုငျရုပျရှငျထုတျလုပျရေး ကိုလညျး စီစဉျဆောငျရှကျနသေူတဈဦးပါ။ ဒီလိုပိုငျဆိုငျမှုတှရှေိလာနိုငျအောငျလညျး ခငျပှနျးဖွဈသူက အလုပျကွိုးစားသလို သူကိုယျတိုငျကလညျး အိမျထောငျမှုကိုထိနျးသိမျး ရ တယျလို့ အငျတာဗြူးမှာဖွဆေိုခဲ့ဖူးပါတယျ။ အခုဆိုရငျ စမိုငျးလျရုပျရှငျထုတျလုပျရေးကိုပါ ဦးဆောငျနသေလို ပရိသတျနဲ့ အဆကျအသှယျမပွတျဖို့ သရုပျဆောငျ အလုပျတှပေါ ပွနျလုပျနပွေီလို့ သိရပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ အဘှားဖွဈသူ ဝါရငျ့သရုပျဆောငျကွီး ဒျေါခငျလေးဆှရေယျ၊ သူခဈြရတဲ့ ခငျပှနျးရယျ၊ သမီးလေး နှဈယောကျရယျ နဲ့ပြျောစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖွတျသနျးနတော ဖွဈပါတယျ။